पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिडका तीन सय बिरामीको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अक्सिजन अभाव भएपछि १ सय ७० जनालाई मात्र भर्ना लिएर सेवा दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यका अनुसार भर्ना भएका ८० प्रतिशत बिरामी अक्सिजन चाहिने छन्।
‘अक्सिजन अभावले गर्दा अस्पतालहरू तनावग्रस्त भएका छन्’, वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. धु्रव गैरेले भने। अक्सिजन नपाएका कारण विभिन्न अस्पताल हुँदै वीरमा आइपुगेका बिरामीको तत्कालै मृत्यु हुने गरेको डा. गैरेले बताए। ‘अक्सिजन नभएपछि साना अस्पतालले ठूलो अस्पतालमा लैजाऊ भन्दै पठाउँछन्। एम्बुलेन्समै अक्सिजन लेभल घटिसकेको हुन्छ। यस्ता बिरामी हामीकहाँ आइपुग्ने बित्तिकै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्’, उनले भने। ‘अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई त्यत्तिकै भर्ना गरेर मार्नु भन्दा अस्पतालहरूले आमाकै काखमा मरुन् भनेर भर्ना लिन छोडे’, उनले थपे। राजधानीका धेरै सरकारी कोभिड अस्पतालले अक्सिजन अभावले कोरोनाका बिरामीको छिटो मृत्यु हुने गरेको संकेत गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने उपत्यकाबाहिरका मुख्य सहरबाट अक्सिजन ल्याएर राजधानीमा व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। बिहीबार विराटनगर र पोखराबाट हेलिकोप्टरमा अक्सिजन ल्याएको मन्त्रालयका विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। बिजुली, मर्मत सम्भार तथा मजदुरको अभावमा उपत्यकाका अस्पतालले आफूसँग भएका प्लान्टबाट पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्न नसक्दा पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘एकैचोटि धेरै संख्यामा बिरामी परेपछि अमेरिका, युरोपका सम्पन्न देशले पनि अक्सिजनको माग पूरा गर्न सकेका थिएनन्, नेपालले सक्ने कुरै भएन’, स्वास्थ्य प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने। अक्सिजन अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी अस्पताललाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएको छ।